Samy seriny teo daholo tao anatin’izay herinandro maromaro izay ny rehetra. Indrindra ny fitondram-panjakana. Nodiovina daholo izay mora hitan-donto rehetra ary izay tsy tratra tao anatin’izay fotoana toa zary nihazakazahana izay aloha izany dia aleo afenimpenina ihany. Sady lehibena finoana matanjaka eto ambonin’ny tany no horaisina no mbola mpitondra fanjakana ihany koa. Voninahi-pirenena miditra ny toy izany ka heverina fa fady ny manao kinanga azy. Ankoatra ny dinika ara-pinoana, indrindra ho an’ny Kristianina Katolika dia tsy maintsy tafiditra ao anatiny koa ny fanamafisam-pifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny fanjakana vatikanina. Fanararaotra ireo fotoana fohy mandalo kanefa sokajiana ho goavambe ireo hisian’ny fifampidinihana rehetra ho amin’ny mety ho fiaraha-miombon’antoka azo atao. Ny dikan’izany dia hisoroka fahafaham-baraka indray aloha satria aty amin’ny nosintsika ny mason’izao tontolo izao. Ny irariana dia ny mba hitondra fiadanana, araka ny nampahafantarana azy tokoa, ity fandalovana olobe manan-kaja eto ity.